အပြစ်မမြင်ပါဘူး ( The End ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အပြစ်မမြင်ပါဘူး ( The End )
အပြစ်မမြင်ပါဘူး ( The End )
Posted by မောင် ပေ on Aug 5, 2011 in Creative Writing, Drama, Essays.. |7comments
နွေ ၊ မိုး ၊ ဆောင်း တို့ တစ်လှည့်စီ ပြောင်းလဲခြင်း နှင့် အတူ ရန်ကနား ၏သမီးလေး ချစ်စုသည် လည်း မူကြို တက်သည့် အရွယ် ၊ ၅ နှစ်ကျော် သို့ ရောက်လာခဲ့သည် ။
အရွယ်ရောက်လာသည် နှင့် ချစ်စု လေး ၏ မျက်နှာမှာ တရုတ်ရုပ်တစ်ဖြည်းဖြည်းပေါက်လာသည် ။ ချစ်စု ကို တရုတ်မ လို့ လည်း ရပ်ကွက် က ဝိုင်းအမည်ပေးထားသည် ။ ချစ်စု (ခ) တရုတ်မ ပေါ့လေ ။ ရန်ကနား တစ်ယောက် သမီး ကို သူများ သားသမီးတွေ လို မူကြို ထားချင်သောကြောင့် ၊ သမီးကိုခေါ်ကာ မူကြို သို့ သွားရောက်ခဲ့သူ ရန်ကနား တစ်ယောက် မူကြို မှာ ပြဿနာတက်ရသည် ။
“ ဘယ်လို…ဒီ သမီးလေး က ရှင့်သမီး ၊ ဟုတ်လား ၊ ကြည့်လဲ လုပ်ပါဦးဦးရန်ကနား ရယ် ၊ ကုလား က တရုတ်မွေးတယ်လား ”
မူကြို ရှိ ကျောင်းအပ်ခံ ဆရာမလေး များ အားလုံး အူတက်ကုန်ကြသည် ။
“ ဆရာမ နော် ….၊ မစော်ကားပါနဲ့၊ သမီးလေး ကို နော် ကျွန်တော်မွေးစားခဲ့တာပါ ၊ တစ်ကယ့် သမီးအရင်းလို ချစ်လို့ ၊ ကျွန်တော် ရှာဖွေရသမျှ နဲ့ ကျွေးမွေး ခဲ့တာပါ ၊ ချစ်စု ဟာ ရန်ကနား သမီး ၊ ရန်ကနား ဟာ ချစ်စု ရဲ့ အဖေ ဆိုတာ ကို ရန်ကနား တို့ တစ်ရပ်ကွက်လုံး သိတယ်နော် ”
“ ကောင်းပြီလေ ၊ ဒီကလေး ဟာ ရှင့်ကလေး မှန်တယ်ဆိုရင် ၊ မနက်ဖန် ကြ ရှင်တို့ရပ်ကွက်လူကြီး ကို ခေါ်လာပြီး သက်သေပြခိုင်းပါ ၊ ဒီနေ့ တော့ ကျွန်မ တို့အနေနဲ့၊ မယုံကြည်တဲ့ အတွက် ၊ ရှင်တို့ ပြန်နိုင်ပါပြီ ”
ရန်ကနား တစ်ယောက် ရှူးရှူး ရှဲရှဲ ဖြင့် သမီးလေး လက် ကို ဆွဲ ကာ မူကြို မှ ပြန်လာခဲ့သည် ။ သမီးလေး က စကားတတ်လွယ်သည် ။
“ ပါပါး ၊ ချောန က ဒေါ်ဒေါ်လေး တွေ ကို ပါးပါး ပြောလိုက်တာလေ ၊ မွေးချား သမီး ဆိုတာ ဘာလဲ ဟင် ”
ရန်ကနား တစ်ယောက် ဖြေရ ကြပ်သွားသည် ။
“ သြော်…..အဲဒါက ၊ဒီလိုလေ…. မီးမီး က ပါပါး ကို ချစ်တယ် မလား ”
“ အင်း ချစ်တာပေါ့ ၊ အရမ်းချစ် ၊ မိုးလောက်ကြီး ချစ် ”
“ ပါပါး က လဲ မီးမီး ကို အရမ်းချစ်တယ် ၊ အဲဒီလို ဖြစ်တာကို နောက်တစ်မျိုးအနေနဲ့ ပြောတာ ကို မွေးစားသမီး လို့ခေါ်တာ မီးမီး ရဲ့……၊ ဟုတ်ပြီလား ”
“ အင်း…ပါးပါး မီး ကို ဒီနေ့ မူကြို လိုက်ပို့ မယ် ဆို ၊ စောစော က ဒေါ်ဒေါ် တွေ နဲ့ ပါးပါး စကား ဘာလို့ များတာလဲ ဟင် ”
“ အော်…..အဲဒါက ၊ ပါပါး က ပြောလိုက်တာလေ ၊ သူတို့ ကျောင်း က အရမ်းညံ့တယ် လို့၊ ငါ့ သမီးကို မထားချင်တော့ဘူး လို့၊ ပါပါး ပြောလိုက်လို့၊ သူတို့ တွေ က ပါပါး ကို မကျေမနပ် ဒေါသ တွေ ဖြစ်နေတာပါ…… လာပါ ၊ မီးမီး ကို အဲဒီ ကျောင်းထက် အများကြီး ပိုကောင်းတဲ့ ကျောင်းကို ပါပါး လိုက်ပို့ မယ် ။ ”
ချစ်စု နှင့် ရန်ကနား တို့ သားအဖ ၊ ရပ်ကွက်ရုံး သို့ သွားကာ ဦးမိုင်ခေါင် ကို သွားရှာသည် ။
“ ဟော…. ရန်ကနား တို့ သားအဖ ၊ ကြည့်စမ်း….တရုတ်မလေး က အရမ်းထွားလာတာပဲ ၊ တစ်နေ့ တစ်ခြား ချစ်စရာ ကောင်းလာတယ် နော် ”
“ ဦးမိုင်ခေါင် ..၊ ငါနင်နဲ့ ပြောစရာ ရှိလို့၊ … မီးမီး လေး ဒီမှာခဏထိုင်နေနော် ”
ရန်ကနား နှင့် ရပ်ကွက်လူကြီး ဦးမိုင်ခေါင် တို့၊ ရုံး အနောက် ဘက် အခန်းသို့ ဝင်ပြီး စကားပြောကြသည် ။ ရန်ကနား တစ်ယောက် မူကြို တွင် သူ ကြုံ ခဲ့ရသည် များ ကို ပြန်ပြောပြ လိုက်သည် ။
“ ဒါဆို ရင်တော့ ၊ မင်း ကို ချစ်စု ရဲ့ တရားဝင် မွေးစား အဖေ ဖြစ်လာဖို့၊ ငါတို့ စာချုပ် စာတမ်း နဲ့ လုပ်ကြ ရမှာပေါ့ကွာ ”
“ မြန်မြန်လေး လုပ်ပေးပါ လူကြီး ရယ် ၊ ငါ့ မှာလေ … ဒီသမီးလေး ရလာကတဲ က ငါ့သမီး အရင်းလို ချစ်ခဲ့တာပါ ၊ နင် မြန်မြန်လေး ကူညီပေးပါကွာ ၊ ငါ့ဘက် က ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ ပြော ”
“ ရပါတယ် ၊ မနက်ဖန် မနက်ကြမှ ၊ ဒေါ်ညို တို့ မအေး တို့ ကို ပါခေါ် ၊ သက်သေထားပြီး ၊ တို့ စာရွက်စာတမ်းတွေ လုပ်ကြတာပေါ့ ၊ အဲဒါလုပ်ပြီး ရင်တော့ ချစ်စု ဟာ နင့်ရဲ့ တရားဝင် သမီး ဖြစ်ပါပြီ ”
သို့ ဖြင့် သားအဖ နှစ်ယောက် အိမ်ပြန်ခဲ့ကြသည် ။ ချစ်စု လေး က ၆ နှစ် မပြည့်သေးသော်လည်း ဖအေ ကို ကောင်းကောင်းကြီး ကူညီပေးတတ်နေပြီ ဖြစ်သည် ။ ရန်ကနား ဈေးရောင်းထွက် ရန် လိုအပ်သည် များကို ကူညီပေးသည် ။ ရန်ကနား အကြော်ထည့် ရောင်းရန် စက္ကူ ကတော့ များ မှာ ချစ်စုလေး ဝိုင်းကူခေါက်ပေးထားခြင်း ဖြစ်သည် ။ ရန်ကနား ဈေးရောင်းထွက် လျှင် ချစ်စုလေး ကို ဆိုက်ကားဆရာ ကိုထွေး ၊ မအေး တို့ အိမ်တွင် အပ်ထားခဲ့ စမြဲ ။ မအေး က ချစ်စုလေး ၏ မိခင်ရင်းလို ပင် ။ ထို့ အပြင် ရပ်ကွက်ထဲ ရှိ လူများကလည်း ချစ်စုလေး ကို အိမ်လည် လာခိုင်းကြသည် ။ ချစ်စုလေး သွားပြီ ဆိုလျှင် တစ်ဝါးဝါး တစ်ဟားဟားဖြင့် ပွဲကြတတ်ကြသည် ။
“ ကုလား သမီး တရုတ်မကြီး ၊ ချားတွေ အများကြီးစီး ” ဟု ကဗျာလိုလို ရွတ်ကာ စနောက်ကြသည် ။
ဒီနေ့ ရန်ကနား တစ်ယောက် ဈေးရောင်းကောင်းခဲ့သည် ။ နေဝင်သည် နှင့် ကြော်စရာ ပဲ မကျန်တော့လောက်အောင် ကို ရောင်းခဲ့ရသည် ။ သမီးလေး အရမ်းကြိုက်သော ကြက်သားလုံးကြော် တုတ်ထိုးကင်လေး များ ဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့သည် ။ ရပ်ကွက်လမ်းထိပ် အရောက် မီးကင်းတဲ နား တွင် ၊ ပလာဒို ( သူတို့ အခေါ် ) ကားအကောင်းစားကြီး တစ်စီး ရပ်ထားသည် ကို တွေ့ ရသဖြင့် ရန်ကနား အံသြ နေသည် ။ ရန်ကနား တို့ ရပ်ကွက် မှာ လမ်းအလွန်ဆိုးသဖြင့် မည်သည့် ကားမျှ မဝင်ကြ ။ ယခု တွေ့ ရသော ကားမှာ လမ်းထိပ် ရပ်ထားသော်လည်း စက်နှိုးထားသည် ကို တွေ့ ရသည် ။ ဒရိုက်ဘာ ဟု ထင်ရသော တစ်ယောက် က ကားပေါ်တွင် ထိုင်နေသည် ။ ရန်ကနား လည်း ကားကြီး ကို သေချာ ကြည့်ပြီး စိတ်ကူးယဉ်မိနေသေးသည် ။
“ ငါ့ သမီးလေး ကို မူကြို လိုက်ပို့ ရင် ၊ ဒီလိုကားမျိုးနဲ့ ပို့ ရလို့ ကတော့…ရှယ်ဖြစ်မှာပဲ ” …… ရန်ကနား တစ်ယောက် စိတ်ကူးယဉ်ပြီး ၊ ပြုံးပြုံးကြီး ဖြင့် သူ့ ရပ်ကွက်လမ်းထဲ သို့ ဝင်လိုက်စဉ် သူ့ ဆီကို ရပ်ကွက်ရုံး မှ စာရေး ပြေးလာသည် ။
“ ရန်ကနား…. ရန်ကနား ၊ အတော်ပဲ ၊ မင်း စောစောပြန်လာတာ ကွက်တိပဲ ၊ ရပ်ကွက်ရုံး ကို အခု လိုက်ခဲ့ ၊ မင်းကို တွေ့ ချင်နေတဲ့ ဧည့်သည်တွေ နဲ့ ဦးမိုင်ခေါင် နဲ့ စောင့်နေကြတယ် ”
ရန်ကနား တစ်ယောက် အူကြောင်ကြောင် ဖြင့် ရုံးသို့ ရောက်သွားသည် ။ ရပ်ကွက်ရုံး ထဲ တွင် သူ တစ်ခါ လူစိမ်း ၃ ယောက် နှင့် ရပ်ကွက်လူကြီး ဦးမိုင်ခေါင် တို့ ကို တွေ့ လိုက်ရသည် ။ လူစိမ်း၃ ယောက် မှာ အသက် ၅၀ကျော် အရွယ် တရုတ်ကြီး နှင့် တရုတ်မကြီး ၊ အသက် ၂၅ နှစ်ခန့် တရုတ်အမျိုးသမီး တစ်ယောက် တို့ ဖြစ်သည် ။ ပုံစံတွေ ကြည့်တော့ မိသားစု လိုက်ဖြစ်မည် ဟု ရန်ကနား ထင်မိသည် ။ သေချာထပ်ကြည့်မိတော့ အသက် ၂၅ နှစ်ခန့် တရုတ်အမျိုးသမီး ၏ မျက်နှာ က သမီး မျက်နှာ နှင့် ဆင်နေသည် ။ ရန်ကနား တစ်ယောက် အံ့သြ လွန်း ကြီးစွာ ဖြင့် စိုက်ကြည့်နေမိသည် ။ ဦးမိုင်ခေါင် မျက်နှာ ကို လှမ်းကြည့်တော့ သိပ်မကောင်း လှ ။
“ လာ…ရန်ကနား ဒီမှာ ထိုင်ကွာ….. ဒီက လူတွေ က ဦးကော့ကျင့် နဲ့ ဒေါ်ဝမ်ယုန် တဲ့ ။ ဟိုဘက် က ကလေးမ လေး က သူတို့ သမီး ၊ မေခြောက်ဖုံ တဲ့ ၊ ငါတို့ တွေ မင်းနဲ့စကားပြောရအောင် စောင့်နေကြတာ ပဲ ၊ မင်း ဒီနေ့ ဈေးရောင်းအပြန် စော တော့ ကွက်တိ ဖြစ်သွားတာပေါ့ ကွာ ”
“ ဒါနဲ့…ငါ့ ကို..ဒီကို ခေါ်တဲ့ ကိစ္စက …”
ဦးကော့ကျင့်…ဆိုသော အဘိုးကြီး က ဝင်ပြောလာသည် ။
“ ဒီလိုပါ…ဒီက ညီလေး ရန်ကနား ဆီ မှာ တရုတ်မလေး တစ်ယောက် မွေးစားထားတယ် ဆိုလို့၊ သတင်းကြားလို့ လိုက်လာခဲ့တာပါ ”
“ ဟုတ်တယ်လေ ၊ မွေးစား ထားတယ် ဆိုပေမယ့် သမီးအရင်း တစ်ယောက် လို ချစ်လို့ သေချာ ကျကျနန မွေးထားတာပါ ၊ ခင်ဗျား တို့ ဘာကိစ္စ ရှိလို့ လဲ ၊ ကျွန်တော် အိမ်ပြန်ရဦးမယ် ၊ ဒီမှာ သမီးအတွက် ကြက်ကြော် တွေ ဝယ်လာတာ ၊ သွားကျွေးရဦးမယ် ၊ ပြောစရာ ရှိတာ မြန်မြန်ပြောပေးပါလား ”
“ ခဏလေး အချိန်လေးပေးပြီး ဦးတို့ ပြောတာ ကို နားထောင်ပေးပါနော် ၊ ဒီလိုပါ ကွယ် ၊ ဟိုဘက်က မေခြောက်ဖုံ ဆိုတာ က ဦးတို့ ရဲ့ တစ်ဦးတည်း သော သမီးလေးပါ ၊ ပြီးခဲ့တဲ့ အချိန် ၇ နှစ်ကျော် လောက်က ၊ ဦးတို့ လင်မယား က တရုတ်ပြည် မှာ စီးပွားသွားရှာနေခဲ့ပါတယ် ၊ သမီးလေး မေခြောက်ဖုံ ကို ဦးရဲ့ ညီမ အိမ်မှာ ထားခဲ့တာပေါ့နော် ။ အဲဒီတုန်းက သူ က တက္ကသိုလ် တက်နေတာပေါ့ ကွာ ”
ပြောရင်း မောသွားဟန် ဖြင့် ဦးကောကျင့် ခဏနားပြီး ၊ ရေသန့် ဘူး ကို ကောက်မော့သည် ။ ဒေါ်ဝမ်ယုံ က သူ ဆက်ပြောမည် အလုပ် ဦးကောကျင့် က လက်ကာပြပြီး ….
“ အဲဒီတုန်းက ဦးသမီး မေခြောက်ဖုံ က အနီးကပ် ဆုံးမ မယ့်လူ မရှိဘူး ဆိုပါတော့ ကွာ ၊ တော်တော်လေး ဆင်ခြင်တုံ တရား မဲ့ခဲ့တယ် ၊ အဲ….တိုတိုတုတ်တုတ် ပြောရရင်ကွာ… သူ တက္ကသိုလ် တက်တုန်းမှာ ရည်းစားရခဲ့တယ် ၊ ရည်းစားနဲ့ လွန်လွန်ကျူးကျူး ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ဝန် ရှိခဲ့တယ် ။ သူ့ ကိုယ်ဝန် ၆ လလောက်မှာ သူ့ ကောင်လေး က ကျောင်းထွက်သွားပြီး သဘောင်္လိုက်သွားတယ် ၊ အခုထိ ပြန်မတွေ့ ရတော့ဘူး ၊ အဲဒီမှာ ဦးသမီး ဟာ သူ့ ကိုယ်ဝန် ကို ရအောင် မွေးပြီး ၊ ဘယ်သူ့ ကို မှ အသိမပေး မတိုင်ပင် ပဲ ၊ သူ့ ရဲ့ တစ်လသား အရွယ် မွေးကာစ ကလေး ကို ဒီရပ်ကွက် ထိပ် က မီးကင်းတဲ ပေါ် မှာ စွန့် ပစ်ခဲ့ လေသတဲ့ ။ ဦးတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ကို ပြန်ရောက်လာတော့ လည်း ဒီကိစ္စ ကို မသိသေးဘူး ၊ အခု ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်လ လောက်က မှ ဒီအကြောင်း ကို သိရတော့ .. လိုက်စုံစမ်းကြည့်တော့ ၊ ဦးသမီး မေခြောက်ဖုံ စွန့် ပစ်ခဲ့တဲ့ ကလေး ကို ၊ ဒီက ရန်ကနား က ကောက်ယူ မွေးစားထားတယ်ဆိုတာ သိလာရတယ် ”
ဦးကော့ကျင့် စကားကို ရပ်ပြီး ရန်ကနား မျက်နှာ ကို သေချာကြည့်သည် ။ အားလုံး က လည်း တိတ်ဆိတ်နေပြီး သူတို့ စကားပြောနေသည် ကို စိတ်ဝင်တစား ဝိုင်းနားထောင်နေကြသည် ။ ရန်ကနား က စကား စလိုက်သည် ။
“ အဟမ်း…..ဒီတော့ ၊ ကျွန်တော် က ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ ”
“ မောင်ရန်ကနား အနေ နဲ့ ..၊ မွေးစားထားတဲ့ ဦး မြေးမလေး ကို ဦးတို့ ကို ပြန်ပေးဖို့ ဦးတို့ က တောင်းဆို ချင်လို့ ပါကွယ် ”
“ ဟာ…ဒီလိုတော့ ဘယ်ဖြစ်မလဲ …၊ ခင်ဗျား တို့ ပစ်ချင်တိုင်း ပစ်ခဲ့ပြီး မှ ၊ ပြန်လိုချင်မှ ဒီလို လွယ်လွယ် တောင်းလို့ ဖြစ်မလား ..။ နောက်ပြီး…ကျွန်တော် က လူပျို လူလွတ်တစ်ယောက်ပါ ၊ အဲဒီတုန်း က သမီးလေး ကို စတွေ့ ကတဲ က မြင်မြင်ချင်း အရမ်းချစ်သွားလို့သေချာ ကျကျနန မွေးလာခဲ့တာ…ဒီတစ်ရပ်ကွက်လုံး သိပါတယ် ဗျာ ..။ ဟေ့လူကြီး ဦးမိုင်ခေါင် ဝင်ပြောဦးလေဗျာ … ”
ဦးမိုင်ခေါင် တစ်ယောက် စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာ ဖြင့် ခေါင်းခါယမ်းနေသည် ။ ဦးကော့ကျင့် က စကားဆက်လာသည် ။
“ ရန်ကနား အနေ နဲ့ဦးတို့ မြေးမလေး ကို ဘယ်လောက် ချစ်တယ် ၊ ဘယ်လို ကျွေးမွေး ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်လာတယ် ဆိုတာ ကို ဦးတို့ သိပြီးပါပြီ ၊ ဒီအတွက် လည်း ရန်ကနား ကို အရမ်းကျေးဇူးတင်မိပါတယ် ၊ နောက်ပြီး ရန်ကနား ရဲ့ ကျေးဇူး ကို ဦးတို့ မမေ့ပါဘူး ။ ဦးတို့ မြေးမလေး ကို ပြန်ပေးပါ ကွယ် ၊ ရန်ကနား ကို ဦးတို့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ကျေးဇူးဆပ် ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ် ”
“ မရဘူး……..မဖြစ်နိုင်ဘူး….မပေးနိုင်ဘူး ၊ ဒီသမီးလေး ကို ချစ်လွန်းလို့ ၊ ဘယ်မိန်းမ မှ မယူပဲ ၊ နေပူမရှောင် မိုးရွာမရှောင် ၊ ဘယာကြော် လည်ရောင်းပြီး လုပ်ကိုင်ရှာဖွေ ကျွေးမွေး လာခဲ့တာ …။ အိုဗျာ…ဘယ်လို နည်းနဲ့ မှ မပေးနိုင်ဘူး ”
ရပ်ကွက်လူကြီး ဦးမိုင်ခေါင် က ဝင်ပြောလာသည် ။
“ မင်းအနေနဲ့ …ဘယ်လို ခံစားရမယ် ဆိုတာ ငါတို့ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် ကွာ ၊ ဒါပေမယ့် ချစ်စုလေး ဟာ သူ့ အဘိုးအဘွား ၊ သူ့ အမေရင်း ရဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု အောက်မှာ နေရမှာက ပို သင့်လျော် မှာပေါ့ ကွာ ။ ဒီတော့ ရန်ကနား ရယ် …။ တရားဥပဒေ အရလည်း မင်း က မင်းသမီးကို တရားဝင် စာချုပ်စာတန်း နဲ့ မွေးရသေးတာ မဟုတ်တော့ ၊ သူ့ မိသားစု အမှန်တွေ လက်ထဲ ပြန်ပေးလိုက်တာ အသင့်လျော်ဆုံးပါပဲ ကွာ ၊ ပေးလိုက်ပါ ကွာ ”
“ ဟုတ်ပါတယ်……ကိုရန်ကနား ရယ် ၊ ကျွန်မ အနေ နဲ့ လေ အမှားကြီး မှားခဲ့ပါတယ် ။ သမီး ကို ဒီမှာ လာစွန့် ပြီး တဲ့ နေ့ ကတဲ က ဒီနေ့ ထိ တစ်ရက်မှ စိတ်မချမ်းသာ ခဲ့ပါဘူး ။ နေ့ တိုင်း ငိုခဲ့ရပါတယ် ။ အခု ကျွန်မ အဖေနဲ့ အမေ တို့ က အကြောင်းစုံ သိသွားပြီးမှ ၊ သူတို့ ကလည်း သူ တို့ မြေး ကို သူတို့ မြင်ချင်တယ် ၊ ကျွန်မ ကို အားလုံး ခွင့်လွှတ်တယ် ဆိုလို့ပြန်လာရှာတော့ တွေ့ ရတာပါ ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုရန်ကနား ကို ကျွန်မ တို့ က တစ်သက်လုံး ကျေးဇူးတင်သွားမှာပါ ၊ သမီးကို မွေးလာခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးဆပ်မှာပါ ။ ကျွန်မ သမီး လေးကို ကျွန်မ ကို ပြန်ပေးပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ် ရှင် … ”
ရန်ကနား တစ်ယောက် ရပ်ကွက် ရုံး ထဲ မှ ပြေးထွက်လာပြီး သူ့ အိမ်သို့ ပြေးသွားသည် ။
“ သမီးရေ….သမီး ”
“ ရှင်….ပါပါး ပြန်လာပြီလား…၊ ပါပါး ဒီနေ့ ပြန်လာတာ စောတယ်နော် ၊ ဈေးအများကြီး ရောင်းခဲ့ရဲ့ လားဟင် ”
ရန်ကနား တစ်ယောက် မျက်ရည်တွေ ကျနေပြီး သမီးကို တင်းကြပ်စွာ ဖတ်ထားလိုက်သည် ။
“ ဟင်…ပါပါး ငိုနေတယ် ၊ ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဟင် …၊ စည်ပင်တွေ က ပါပါး ဈေးခြင်း ကို သိမ်းသွားလို့ လားဟင် ”
“ မဟုတ်ပါဘူး…၊ သမီးလေး ရယ် ၊သြော်….ဒီမှာ ၊ ပါပါး သမီးအတွက် ကြက်သားလုံးကြော်တွေ ဝယ်လာတယ် ၊ သမီး စားလိုက်ဦး ”
ချစ်စုလေး လဲ ပျော်သွားပြီး ရန်ကနားဆီမှ ကြက်ကြော်ထုပ် ကို ယူလိုက်ကာ စားလိုက်သည် ။ ရန်ကနား တစ်ယောက် ဝမ်းနည်း ခြင်းကြီးစွာဖြင့် သမီး ကို စိုက်ကြည့်နေသည် ။
“ သမီး…..၊ သမီး နဲ့ ပါပါး နဲ့ဝေးနေရတော့ မယ် ကွာ ”
“ ဟင်….ဘာဖြစ်လို့ လဲ ဟင် ၊ ပါပါး က ဘယ်သွားမှာ မို့ လဲ ဟင် ”
“ ပါးပါး က ဘယ်မှ မသွားပါဘူး ကွယ် ..၊ အမှန်က သမီးက…သမီးကလေ ပါပါး ရဲ့ သမီးအရင်း မဟုတ်ဘူးကွဲ့ ၊ ပါပါး သမီးကို လမ်းဘေး က ကောက်ရလို့ မွေးစားထားတာ ၊ သမီး ရဲ့ အမေ တို့ အဘိုးတွေ အဘွားတွေ က ပိုက်ဆံ ချမ်းသာတယ် ကွဲ့ ၊ အခု သူတို့ က သမီးကို ပြန်ခေါ်ကြတော့မယ် ”
“ ဟင် မလိုက်ဘူး…၊ သမီး ပါပါး နဲ့ ပဲ နေချင်တယ် ၊ ဘယ်သူ နဲ့ မှ မလိုက်ဘူး ၊ မလိုက်ချင်ဘူး ”
ရန်ကနား တို့ အိမ်ထဲသို့ရပ်ကွက်လူကြီး ဦးမိုင်ခေါင်၊ ဦးကော့ကျင့်တို့ လင်မယား နှင့် မေခြောက်ဖုံ တို့ ဝင်လာကြသည် ။ မေခြောက်ဖုံ တစ်ယောက် ၊ ချစ်စု လေး ကို မြင်သောအခါ ပြေးပြီး ဖက်ချီလိုက်လေသည် ။
“ သမီး……အောင်မလေး သမီးလေးရယ် ၊ ၅ နှစ်ကျော်လုံး အမေ နဲ့ ဝေးနေခဲ့တဲ့ သမီးလေး ၊ ကြည့်ပါဦး အပါးတို့ ရယ် ၊ သမီး က မေလေး နဲ့ ရုပ်တော်တော် ဆင်တယ်နော် ”
“ အဲဒါ သွေးက စကားပြောတာပေါ့ …… ၊ ရန်ကနား ရယ် ၊ မင်းကျေးဇူး တွေ က တော့ ဦးတို့ အတွက် ပြောလို့ ကုန်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး ၊ မနက်ဖန် မှ ဦးတို့ ပြန်လာခဲ့ပြီး မောင်ရန်ကနား ကို ကျကျနန ကျေးဇူးဆပ်မယ်ကွာ ၊ အခုတော့ သမီးကို ခေါ်သွားတော့မယ် နော် ”
ရန်ကနား တစ်ယောက် ဘာမှ မပြောနိုင်ပဲ မျက်ရည်များ သွင်သွင်စီးကာ ဆွံ့ အ နေသည် ။
“ ပါပါး ရေ ၊ သမီး ဘယ်မှ မလိုက်ချင်ဘူး ၊ သမီး ပါပါး နဲ့ ပဲ နေချင်တာ ၊ လုပ်ပါဦး ပါပါး ရေ …ဟီးဟီး ”
“ မငိုပါနဲ့ သမီးရယ် ၊ အဲဒါ သမီး ရဲ့ အမေမှန် ၊ အမေ အရင်းပဲ ၊ သူတို့ နဲ့ လိုက်နေတာ သမီးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြစ်လာမှာပါ ၊ နောက်ပြီး ပါပါး သမီးကို ချစ်တာထက် ၊ သူတို့ က သမီးကို ပိုချစ်ကြပါလိမ့်မယ် ၊ လိုက်သွားတော့နော် ”
ချစ်စု ကလေး က မေခြောက်ဖုံ လက်မှ ဇွတ်ရုန်းသည် ။ ရန်ကနား လည်း ဆုံးဖြတ်ချက် တစ်ခု ကို ချလိုက်ကာ ၊ သူ အကြော်ကြော်သည့် သံယောက်မ ကို ယူပြီး သမီး တင်ပါး ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်လေး တစ်ချက် ရိုက်လိုက်သည် ။ ထို့ နောက် အိမ်နံရံ ကို အသံမြည်အောင် ခပ်ပြင်းပြင်း ရိုက်လိုက်ကာ
“ ဒီမယ်…ငါနဲ့ နင် လုံးဝ မနေ ရတော့ဘူး ၊ နင့် ကို ငါ ပေးမနေတော့ဘူး ၊ နင် ရှိနေလို့ ငါ မိန်းမ ယူလို့ မရတာ ၊ သွား…နင့်အမေ တို့ နဲ့ လိုက်သွားတော့ ၊ မလိုက်လို့ ကတော့ အခု ရိုက်သလို ထပ်ရိုက်မယ် ၊ နေ့ တိုင်း နင့်ကို ရိုက်မယ် ၊ ဘာထမင်း ဘာမုန့် မှ လည်း ကျွေးမှာ မဟုတ်ဘူး …၊ သွား….. ”
ချစ်စု လေး တစ်ယောက် အသားကုန် အော်ငိုရင်း ရန်ကနား ကို သေချာ စိုက်ကြည့်ကာ ။
“ ကောင်းပါပြီ…ပါပါး ရယ် ..၊ ပါပါး က မနေစေချင်တော့ ဘူး ဆိုရင်လည်း ၊ သမီး လိုက်သွားပါတော့မယ် ၊ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ .. သမီး ပါပါး ကို ကန်တော့ခဲ့ပါတယ်နော် ”
ချစ်စုလေး တစ်ယောက် ရန်ကနား ခြေထောက်များ ကို ဖက်တောင်းပန်လိုက်ပြီး ထိုင်ကန်တော့လိုက်သည် ။ ရန်ကနား သည် မျက်နှာလွှဲနေသည် ။ ထို့ နောက် ဦးကော့ကျင့် တို့ မိသားစု နှင့် အတူ ချစ်စုလေး တစ်ယောက် လိုက်ပါသွားတော့လေသည် ။ ဦးမိုင်ခေါင် က ရန်ကနား ပခုံးကို လာဖက်ရင်း နှစ်သိမ့်လိုက်သည် ။
“ စိတ်လျှော့လိုက်ပါတော့ ကွာ ၊ အကြောင်းစုံ သိသွားပြီး ရင် သမီး က မင်းဆီ မကြာခဏ ပြန် အလည်လာမှာပါ ”
“ ငါ ရင်တွေ ကွဲကြေလု နီးပါး ပါပဲ ဦးမိုင်ခေါင် ရာ ၊ ငါ့ သမီးလေး ဟာ ငါ့ဘဝ ထဲ ကို ခဏ အလည်လာခဲ့တာပေါ့နော် ၊ ဒီလို ဖြစ်လာအောင် ဘယ်သူ လုပ်ခဲ့တာလဲဟင် … ၊ ငါ ဘယ်သူ့ ကို သွားပြီး အပြစ်တင်ရမှာလဲ………ပြောစမ်းပါဦးကွာ……… ”
( ကိုယ်တိုင် စဉ်းစား ၊ စိတ်ကူး ရေးသားထားခြင်း ဖြစ်ပါကြောင်း ဝန်ခံပါသည် )
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
ဒီတစ်ခါတော့ ဇာတ်သိမ်းတာ မြန်သွားပြီပေါ့ …
ဒီထက် နည်းနည်းလေး ချဲ့လိုက်ရင် ပိုအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်တယ်
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလဲ ဖတ်ရတာ ကောင်းပါတယ်
ဆက်ရေးပါ အားပေးနေပါတယ် …
အင်း အရေးအသားကောင်းပါတယ် အားပေးရန်ဆက်လက်စောင့်မျော်နေပါမည်။ ရန်ကနားကြီးကသနားပါတယ် တရုတ်မိသားစုက မတရားဘူးလို့ထင်ပါတယ် ပြစ်တုန်းကပြစ်ထားခဲ့ပြီးတော့
အဖေတစ်ခု သားတစ်ခုကားထဲက မင်းသားစိန်မြင့်ကို ပြေးမြင်မိတယ်
ဇာတ်ကားကြည့်ရတဲ့ အဒေါ်ကပြန်ပြောတော့ ပိုခံစားရတယ်
ဒီလောက် မြန်မြန်ဇာတ်သိမ်းလိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားပါကြောင်း
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်း ဇာတ်နာမလို့ ကြံတုန်းပဲ ရှိသေး..ကောကျင့်နဲ့မယ်ခြောက်ဖုံ ပါလာလို့ဟီး.ဟီး..
ရန်ကနား တစ်ယောက် သမီးဆီ အပြေးသွားပြီး..အလွမ်းသည်ချိန်မှာ..သမီက စည်ပင်တွေက..
ဆိုလို့ ….၀ဲချင်တဲ့ မျက်ရည်တောင် ပြန်ဝင်သွားတယ်
Shwe Myine Thar says:
ကိုတော်ကာရေ ရန်ကနားကမွေးစားသမီးတောင်ဒီလောက်ချစ်ရင် သမီးအရင်းဆိုရင်ပိုချစ်မယ်ထင်နော် ….